Dr Cabdiwaasac Bade Oo Jigjiga Online Uga Warramay Xilka Cusub Ee Loo Magacaabay - Jigjiga Online
HomeSomalidaDr Cabdiwaasac Bade Oo Jigjiga Online Uga Warramay Xilka Cusub Ee Loo Magacaabay
Dr Cabdiwaasac Bade Oo Jigjiga Online Uga Warramay Xilka Cusub Ee Loo Magacaabay
Addis Ababa (JO) – Wasiiru-dawlaha Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Itoobiya, Dr. Cabdiwaasac Cabdillaahi Bade ayaa ka hadlay xilka cusub ee looga magacaabay xarunta dhexe ee xisbiga talada dalka haya ee Barwaaqo.
Dr. Cabdiwaasac Cabdillaahi Bade ayaa Jigjiga Online u xaqiijiyey in wararka labadii maalmood ee ugu dambeeyey la isla dhex-marayay ee sheegayay in xil loo magacaabay ay yihiin kuwo run ah oo uu haddaba isku diyaarinayo xilka cusub ee loo magacaabay.
Wasiiru-dawluhu waxa uu sharraxaad ka bixiyey nooca uu yahay xilka cusub ee looga magacaabay xarunta dhexe ee Xisbiga Barwaaqo, kaas oo ka dhigaya masuulka ugu sarreeya ee Soomaaliga ah ee heer federaal.
Wasiirka oo Jigjiga Online khadka telefoonka kula xidhiidhay, ayaa waxa uu tilmaamay inuu noqonayo masuulka Soomaalida u fadhiyaya xarunta Dhexe ee Xisbiga Barwaaqo, isla markaana uu madax ka noqonayo waaxda kor u qaadidda iyo kobcinta dimuquraadiyadda.
Dr-ka oo ka jawaabayay su’aal aanu ka weydiinay xilkiisa cusub ayaa waxa uu yidhi: “Walaal, meeshu (xilku) waa wasiir buuxa oo Soomaalida u fadhiyaya xarunta dhexe ee PP, ahna Madaxa kor u qaadidda iyo kobcinta dimuquraadiyadda.”
Dhinaca kale, Dr. Cabdiwaasac waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku hawlanaa wacyigelin uu shacabka Soomaaliyeed ugaga digayo xanuunka halista ah ee Coronavirus (Covid-19), iyada oo baraha bulshada kusoo bandhigayay farriimo, waxaana uu ka codsaday shacabka inay taxaddar muujiyaan oo ay u hoggaansamaan talooyinka dhakhaatiirta caafimaadka ee lagu xakamaynayo xanuunkan.
Bahda Jigjiga Online waxay wasiirka ugu hambalyaynaysaa xilka cusub, waxaananu Ilaahay uga baryaynaa inuu u fududeeyo, isla markaana uga dallaco mid kasii weyn oo dalka oo dhan uu ku maamulo.
Muxuu Yahay Doorka Indheer-garadka DDS Xilligan Xaasaasiga Ah?
Cudurka korona oo gudaha u galay saldhigga ugu weyn milatariga Mareykanka ee Afrika